Ahoana ny fomba hamafana ny ambadika amin'ny Photoshop, tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Cheats
Ao amin'ity lahatsoratra ity Hampianariko anao ny fomba hanaparitahana ny faran'ny sary amin'ny Photoshop. Tena mahafinaritra raha toa ka rehefa naka sary izahay dia tonga lafatra izy ireo tamin'ny fotoana voalohany ary nibahana ny halalin'ny saha izahay mba hanana ny fifantohana irina, saingy fantatsika rehetra fa tsy mitranga foana izany ary indraindray tsy mahatratra ny valiny izay tianay. Ka… Soraty ity tendrony ity!
1 Sokafy ny sary ary averina indroa ny sosona
2 Safidio ny lohahevitra, tahirizo ny fisafidianana ary mamorona sarontava sarontava
3 Esory amin'ny lohahevitra tsy mazava ny lohahevitra
4 Ampiharo ny sivana an-tsaha ary esory ny sisiny
Sokafy ny sary ary avereno indroa ny sosona
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop fa te-hanitsy izahay, ary hanao kopia roa izahay. Mba hamerenana ny sosona dia mila tsindrio fotsiny ianao ary sintomina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra safidy (Mac) na alt (Windows). Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny takelaka fisaka> sosona duplicate. Zava-dehibe amin'ity fampianarana ity ny fahalalana izay misy ny sosona tsirairay, noho izany Hantsoinay ny "layer background", ilay kopia voalohany "blur" ary ny "subject" farany.
Safidio ny lohahevitra, tahirizo ny fisafidianana ary mamorona sarontava sarontava
Ao amin'ny "layer sujet" andao hifidy ilay zazavavy, Efa nampiasa ny mifidy fitaovana sujet, ataovy tsara ny fifantenana ary ampiasao ny saron-tava mba hahatonga azy io ho tonga lafatra araka izay tratra. Avelako amin'ity rohy ity ianao a fika hanaovana safidy tsara kokoa. Tehirizo ny fifantenana, satria ilaintsika izany avy eo. Mba hanaovana izany dia mandehana any amin'ny tabilao fifantina> tahirizo ny fifantenana. Ary farany, amin'ny tsindrio ny marika hita fa voahodidin'ny sary etsy ambony, hamorona sarontava sarimihetsika izahay.
Esory amin'ny lohahevitra tsy mazava ny lohahevitra
Ao amin'ny «blur layer», hanao izany isika fisafidianana entana fa efa tahirintsika tamin'ny dingana teo aloha. Mila mandeha any amin'ny tabilao fifantina> enta-mavesatra fotsiny ianao dia hiseho eo amin'ny efijery izy io. Andao esory ilay zazavavy, ary hataontsika izany amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tabilao fanovana> fenoy, ao amin'ny varavarankely izay hisokatra hisafidy "Fenoy araka ny atiny". Tsy ho tonga lafatra izy io, fa aza manahy satria zara raha ho hita izany.
Ampiharo ny sivana an-tsaha ary esory ny sisiny
Handefa fangatahana izahay a sivana mankany amin'ny "blur" layer. Tsindrio eo, ary mandehana any tabilao fanivanana> galeriana vokarin'ny vokarin'ny vokaranao Hisokatra ny tontonana iray izay ahafahanao manitsy ny manjavozavo araka ny itiavanao azy, afaka misafidy fikajiana voajanahary kokoa ianao na blur tsikaritra kokoa.
Alohan'ny hanomezana ny valiny farany, zahao ary zahao ny sisiny, mety misy simba izany. Mba hanitsiana azy dia mankanesa any amin'ny saron-tava fifantina ary miaraka amin'ny borosy, mampiasa ny fotsy mba hita maso ary ny mainty hosaronany, mandoko ary amboary ireo sisiny ireo (ao amin'ny horonantsary fantsona YouTube azonao jerena amin'ny antsipiriany kokoa ny fomba hanaovana azy).
Ity ny valiny farany misy ambaratonga hafa ifantohana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hamafana ny ambadika amin'ny Photoshop, tsikelikely